TikTok video ah rah nool oo lagu soo diray bostada ayaa dhaliyay caro - Jowhar somali news leader
U-doodayaasha xuquuqda xayawaanka waxay ka walaacsan yihiin in xayawaannada guryaha waxyeelleeya marka la soo diro.
In kasta oo dhaqankan la nidaamiyay si loo yareeyo halista waxyeellada xoolaha, haddana waxay ka tarjumaysaa u janjeeridda bulshada ee “ceyrinta” xayawaanka, ayaa leh hay’adda samafalka xuquuqda xoolaha Fondation 30 Millions d’Amis.
Fiidiyow muujinaya gabadh yar oo da ‘yar oo furaysa baakad lagu xidhay sharooto kana soo saaraysa sanduuq yar oo leh rah yar oo jaalle ah ayaa lagu daabacay TikTok Maarso 23, 2021. Tan iyo markaas waxay heshay 347,800 aragti:
Gabadhu waxay xirxirtaa xirmada waxayna ku riday raha terrarium yar oo ay sheegtay inay iyadu is sameysay.
Dhowr qof ayaa ku qoray qaybta faallooyinka inay la yaabeen markay arkeen rah nool oo baakad loo geeyay sidii dhar ama kabo. Qaar kale waxay yiraahdeen gabadha uma muuqato inay wax ka ogtahay xayawaanka ay hadda qaadatay.
Fiidiyow kale, oo la daabacay maalinta xigta, gabadha yar waxay sharraxaysaa in ay ka qaadi kari weyday xayawaanka dukaanka maxaa yeelay aad buu u fog yahay. Waxay ballanqaadday inay dalbanayso terrarium iyo derin kululaynta si xayawaanka looga dhigo mid raaxo leh intii suurtagal ah.
In kasta oo dhaqanku u muuqdo wax lala yaabo, haddana maaha wax aan caadi ahayn in loo diro xayawaan baakado ku jira. TikTok, dhalinyaro badan ayaa soo dhigay fiidiyowyo muujinaya sanduuqyo furan oo ah ambiibiyiin, kalluun ama cayayaan.
Wiilkan dhalinyarada ah ee ku nool Boqortooyada Midowday wuxuu u daabacay fiidiyow TikTok Diisambar 3, 2020 oo muujinaya kalluun uu ka dalbaday Ebay oo loogu soo diray xirmo.
Fiidiyowgaan, oo lagu duubay Boortaqiis laguna daabacay TikTok 28-kii Maarso, wuxuu muujinayaa qof furaya xirmo ay ku jiraan nacas.
Ururka daryeelka xoolaha ee Faransiiska Fondation 30 Millions d’Amis ayaa ka hadlay dhaqankan, inkasta oo ay sharci ka tahay Faransiiska. Hay’ad samafal ah ayaa sheegaysa in isbeddelladani ay muujineyso u janjeerka bulshada ee xayawaanka ceyriinka ah.
“Markuu iibiyuhu damiir leeyahay, dhib kuma jiro inuu diro neef. Laakiin anshax ahaan ma ahan wax qumman. ”
Stéphane Rosselle waxay ku koraan amphibians iyo xamaarato ku nool Reptilis, oo ah xarunta taranka ee raha u soo dirtay fiidiyowga TikTok ee kiciyay geed. Wuxuu u sheegay kooxda JowharObserver in shirkadiisu ay daryeesho hubinta in xoolaha sida ugu raaxo badan loo raro:
Xoolo kuma dirno adeegga boostada, waa inaan adeegsanno adeeg gaar ah. Xirmada ayaa ka baxeysa xafiisyadeena habeenkii waxaana loo keenayaa macaamiisheena subaxa dambe.
Sanduuqa waxaa ku jira sanduuqa polystyrene. Gudaha gudihiisa, xayawaanka waxaa lagu hayaa sanduuq gaar ah oo leh gogol gaar ah oo qoyan si neefku u ahaado mid biyaysan. Sanduuqa waxa kale oo ku jira kuleyliyeyaal yaryar si loo hubiyo in xayawaanku kululaado ku filan. Waxaan sidoo kale ku darnaa xaashi caarad ah oo leh tilmaamo fara badan oo ku saabsan sida loo daryeelo xayawaanka.
Waxaan raacnaa isla nidaamka markii aan xayawaan u dirno dukaanka xayawaanka.
Laga soo bilaabo 20 sano oo waayo-aragnimo ah, waxaan ku tirin karaa hal gacan inta jeer ee uu xayawaan dhibaato ku qabay rarka. Kooxdayadu waxay ka kooban yihiin dad jecel xayawaankan. Hadday khatar ku tahay xayawaanka, waxaan noqon lahaa qofkii ugu horreeyay ee dhaha yaanan yeelin.
Hemminki Johan, oo ku takhasustay cilmiga dhirta (qof ku takhasusay barashada xamaaratada iyo amphibians-ka) ee Wakaaladda Deegaanka ee Kaladuwanaanta Noolaha ee Île-de-France, ayaa sheegtay in gaadiidka xoolaha nool aan qatar laheen
Amphibians-ku waxay ubaahanyihiin deegaanadooda qoyan maxaa yeelay maqaarkoodu waa mid aad u jajaban kuna daboolan nooc xab ah oo had iyo jeer ubaahan in lagu qoyo. Xagga xamaarato, ku guuridda sanduuq maalintii oo dhan waxay sababi kartaa naxdin sababi karta dhimasho. Waxay sidoo kale aad ugu nugul yihiin qabowga.
Markii wax walba sifiican loo dhammeeyo, markuu iibiyuhu damiir leeyahay, gaadiidku xayawaan naftiisa khatar uguma aha. Laakiin anshax ahaan, ma ahan wax kaamil ah. Ku xirnaashaha saacado sanduuq ah waxay xayawaanka gelineysaa culeys aad u badan. Aynu nidhaahno ma heli doono maalintiisa ugu fiican.
Fiidiyowgaan oo la daabacay 24-kii Maarso, waxaad ka maqli kartaa dhallin-yarada oo leh rahii ayaa aad u walaacsanaa maalintii uu yimid. Waxay isku dayday inay gacanta ku hayso xayawaanka ruxaya.
Si kastaba ha noqotee, xayawaanka badanaa waxaa lagu raraa warshadaha xayawaanka.
Xoolaha qaar waxaa laga keenaa dibada, halka qaarna laga raro xarumaha taranka si loo geeyo bakhaarada xayawaanka.
Lucas Flenghi waa dhakhtar xoolaha ku takhasusay waaxda xayawaanka cusub (NAC ama Nouveaux Animaux de Compagnie) ee rugta caafimaadka xoolaha ee Cordelier Meaux (77). Wuxuu yidhi dhaqanka ku iibinta xayawaanka internetka badanaa waxay ka dhigan tahay in milkiilayaasha cusub aysan aqoon fiican ka helin sida loo daryeelo xayawaankooda:
Waxa naxdinta leh ayaa ah inaad iibsan karto noole sida sharaabaadyo labo ah. Haddii aad ka iibsato xayawaan dukaanka xayawaanka, iibiyuhu wuxuu kuu sharxi karaa sida loo daryeelo neefka una hubiyo inuu qofku diyaar u yahay inuu daryeelo. Waa noole leh baahiyo gaar ah. Maaha masuuliyad aad u badan in la iibsado xayawaan rabaayadaysan iyada oo aan la ogeyn sida loo daryeelo.
Indirect talks between the US and Iran on the nuclear deal: What can we expect?